Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. तीजमा न्यायको कामना – Emountain TV
तीजमा न्यायको कामना
काठमाडौँ, २८ भदौ । महिलाहरूको विशेष पर्व अर्थात् हरितालिका तीज मनाइरहँदा महिलाले निर्धक्क बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित होस् भन्ने आवाज यसपालि निकै उठ्यो ।
कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तका हत्यारालाई जोगाइराखेको र बलात्कारका घटना कम हुन नसकेको भन्दै कलाकर्मीले तीजको सन्दर्भमा निराशा पोखे । महिलाले बाँच्नका लागि सुरक्षित वातावरण पाऊन् भन्ने तिनको माग थियो । अभिनेत्री केकी अधिकारीले बुधबार बिहानै तीजको सन्देशमूलक शुभकामना ट्वीट गरिन् । उनले लेखेकी छन्, ‘निर्धक्क भई नाच्न, गाउन, खुलेर हाँस्न अनि बाँच्न तीजको सहारा लिन नपरोस् । हरितालिका तीजको हामी सबैलाई निडर शुभकामना ’अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठले पनि अन्यायविरुद्ध लड्ने शक्ति मिलोस् भन्ने आशयको ट्वीट गर्दै तीजको शुभकामना बाँडेकी थिइन् । ‘जीवनमा आइपर्ने अप्ठयारासँग जुध्न हामीलाई तागत प्राप्त होस्,’ उनको ट्वीट थियो, ‘सम्पूर्ण महिलालाई अझ बढी शक्ति मिलोस् । हयाप्पी तीज ।’
अनशन होइन, व्रत
फिल्मको प्रचारमा डुलिरहेकी भए पनि अभिनेत्री पूजा शर्माले तीजको रीत छोडिनन् । उनी बुधबार ‘रामकहानी’ लिएर चितवनमा थिइन् । ‘निराहार व्रत बसेर भए पनि’ उनले दर्शकसँग रमाइलो गरिन् । ‘धेरै वर्ष भयो तीजमा व्रत बस्न थालेको,’ उनले भनिन्, ‘विश्वास लाग्छ । एक छाक खाएर व्रत बस्छु ।’ पूजाले राम्रो पति पाउन नभएर आफ्नै लागि व्रत बसेको बताइन् । साँझ फलफूल खाएर व्रत तोड्ने सोचमा रहेकी उनले दिनभर चाहिँ पानीसमेत नखाएको दाबी गरिन् ।
‘यहाँ हलहरू हाउसफुल छन्,’ उनले उत्साहित हुँदै भनिन्, ‘तीजमा व्रत बसेको फल अहिले नै पाइसकेँ जस्तो लागिरहेको छ ।’ अविवाहित पूजा व्रत बसिरहँदा यसैपालि दाम्पत्य जीवनमा बाँधिएकी गायिका सुबानी मोक्तान टन्न खाएर बसेकी थिइन् । उनले आजसम्म तीजको व्रत नबसेको बताइन् । ‘हाम्रोमा त्यस्तो चलन छैन,’ उनले भनिन्, ‘बरु, दर कार्यक्रममा चाहिँ धेरै गइयो । नखाएरभन्दा खाएरै तीज मनाउने गरेकी छु ।’ उनलाई यो पर्व सम्बन्ध नजिक्याउने अवसरझैं लाग्छ ।
‘पहिलेभन्दा अहिलको तीज बढी रमाइलो हुन थालेको छ,’ सुबानीले सुनाइन्, ‘नाचगान, रमाइलो गरिन्छ । महिलाहरू अरू बेला कहाँ यसरी खुल्छन् । गायिकाले तीजको शुभकामना व्यक्त गर्दै इन्स्टाग्राममा आफ्नै तस्बिर सेयर गरेकी थिइन् । रातो साडीमा सजिएको उनको तस्बिरमा धेरै लाइक्स आएका थिए । गायिका इन्दिरा जोशी भने बुधबार बिहानै पशुपतिनाथ मन्दिर पुगिछन् । हातमा फूलपातीको टोकरी बोक्दै गरेको तस्बिर उनले पनि इन्स्टाग्राममा राखेकी थिइन् ।
पूर्वमिस नेपाल जेनिशा मोक्तानले पनि रातै कुर्ता–सुरुवालमा सजिएको आफ्नो तस्बिरमा ‘तीजको लहर आयो बरिलै’ क्याप्सन लेखेर इन्स्टातिरै पोस्ट गरेकी थिइन् । अभिनेत्री अनु शाह, प्रकृति श्रेष्ठलगायतले पनि सामाजिक सञ्जालमा तीजको रमझम प्रस्तुत गरेका थिए ।
रंगकर्मी लक्ष्मी बर्देवा बुधबार बिहान आठ बजेतिर उठेर नुहाई धुवाई गरी काममा निस्किइन् । दिउँसो एक बजे दूध र स्याउ खाइन् अनि साँझ पनि फलफूल मात्र खाइन् । ‘म निराहार व्रत बस्दिनँ,’ उनले भनिन्, ‘पानी नखाई बस्नु त झनै खराब लाग्छ ।’
उहिलेदेखि तीजमा व्रत बस्दै आएको लक्ष्मीले बताइन् । उनी साउनको सोमबार र तीजमा सधै व्रत बस्छिन् । ‘पूजापाठ केही गर्दिनँ,’ उनले भनिन्, ‘तीजमा मन्दिर पनि जाने गरेको छैन । तर, खानाचाहिँ छोड्छु ।’ आफूले आफैंलाई सकस दिएर व्रत बस्नु आफ्ना लागि अन्याय हुने भएकाले उनी व्रतलाई अनशनजस्तो बनाउन नहुने तर्क गर्छिन् । ‘खाना नखाँदा केही हुन्न’, उनले भनिन्, ‘तर, पानी पनि नखानुचाहिँ गलत हो । शरीरलाई दुख दिएरचाहिँ व्रत नबसौं ।’कान्तिपुरबाट